आमाछोरा बाख्राको खोरमा !ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भूइँमा सुतेर जीबन काट्दै ! « Online Tv Nepal
आमाछोरा बाख्राको खोरमा !ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भूइँमा सुतेर जीबन काट्दै !
Published : 12 March, 2020 5:21 pm
यासोक बस्तीको बीचमा सानो घर छ । घर छेउछाउ दुर्गन्ध फैलिएको छ । साँघुरो घरको सिकुवामा खाल्डाखुल्डी र फोहोर छ । घरभित्र साँघुरो कोठा छ । एकापट्टि बाख्रा बाँधिएको छ भने अर्कोपट्टि खाना पकाउने चुलो छ । बाख्राको पिसाबले कोठा नै दुर्गन्धित छ ।तर त्यही दुर्गन्धित कोठामा ८० वर्षीया वृद्धा देवीमाया बुढाथोकी र उनका ५१ वर्षीय छोरा शेरबहादुर बुढाथोकी बस्दै आएका छन् । फोहोर र दुर्गन्धले देवीमाया लामो समयदेखि बिरामी भएकी छन् । यो कहालीलाग्दो अवस्था पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–१ स्थित बुढाथोकी बस्तीको हो ।
खाली जमिनमा थोत्रा कपडा ओढेर रात कटाउने गरेको पीडित देवीमायाले सुनाइन् । उनी भन्छिन्, ‘खानेकुरा खोज्न छोरो जान्छ । कहिले लिएर आउँछ, कहिले खाली हात फर्किन्छ ।’ खानेकुरा नभएपछि धेरै रात भोकै काटेको दुःखेसो बुढाथोकीको छ । ओछ्याउने केही नभएपछि खाली भूइँमा सुत्नुपरेको छोरा शेरबहादुरले बताए